Ancelotti: “Dhibaatadu Weerarka Ayay Naga Haysataa”
HomeWararka MaantaAncelotti: “Dhibaatadu Weerarka Ayay Naga Haysataa”
Carlo Ancelotti ayaa ka hadlay guul darradii lama filaanka ahayd ee habeenkii xalay ka soo gaadhay garoonka kooxda Athletico Bilbao ee San Mames kaas oo lagu garaacay kooxdiisa 1-0.
Ancelotti ayaa tilmaamay in mushkiladdu ay ka haysato kooxdiisa khadka hore ee weerarka oo gabay shaqadoodii gool dhalinta.
Halkee ayay Mushiladdu ka haysataa: “Ciyaartu way xidhnayd, waxaanay Athletic xidhatay difaaceeda markii ay goolka dhaliyeen. Dhibaatadayadu ma aha difaaca laakiin waa weerarka. Labadii ciyaarood ee u dambeeyey waxa aanu dhalinay hal gool oo rikoodhe ah, waana halka aanu u baahannahay in aanu wax ka qabanno. Waxa aanu luminnay habsamidii” sidaas waxa yidhi Tababare Carlo Ancelotti.
Caqabadaha haysta: “Shakhsi shakhsi ayay intooda badani u ciyaarayeen, xalkana ninba gaarkiisa ayuu u raadinayay markii loo baahnaa in aanu degdeg u ciyaarno iyo markay ahayd in aanu is dejinnoba. Kubadda maanaan wareejinaynin marka aanay fursadda haysanin, waana mushkiladda nagga haysata qiimaynta xaaladda ee ah goorma ayay tahay in kubadda baas la bixiyo iyo goorta ay kubaddu kaa khasaarayso” ayuu yidhi tababaraha khabiirka ahi.
Beddelka: “waxa aan doonayay in aan dardar gelin siiyo kooxda, waxaanan keenay Jese. Waxa aan saaray Kroos iyo Illarramendi oo labaduba kaadhadh huruud ah haystay”.
Daalka: “Jidh Ahaan awood ayaanu saarnay oo weerar ayaanu ku ciyaarnay qaybtii hore. Dhibaatayadu may ahayn dhinaca jidhka laakiin habaynta weerarkayaga ayay ahayd dhibaatadu”
Masuuliyadda: “Anigaa iska leh masuuliyadda, dadka qaar waxay yidhaahdaan cid kale ayaa leh, laakiin anigaa leh masuuliyadda. Kooxdu si liidata ayay u ciyaaraysaa taasina waxay nagu adkaynaysaa horyaalka, laakiin wali waxba ma dhamaanin, si degdeg ah in aanu u xallino ayaananu isku dayi doonaa”.
BBC waa lama taabtaan: “Dhibaatadyadu ma aha mid shakhsi shakhsi ah. Si fiicann umaanaan ciyaarin, khaladkuna kama imanin lugaha saddexda ciyaartoy. Qof walba masuuliyad ayaa ka saaran weeraridda, waana in ay shaqadooda qabsadaan.”
Lucas Silva: Daawo Bandhig Ciyaareedkii 2014
24/01/2015 Abdiwahab Ahmed
Hull City Oo Ku Noqotay Seria B Iyo Cyrstal Palace Oo Bed-baaday
Faahfahin Dheeraad Ah Oo Ku Saabsan Isku-Aadka Koobka Adduunka 2018 iyo Goobta Lagu Qabanayo
25/07/2015 Abdiwahab Ahmed